एउटै नागको देखियो फरक-फरक रुप,माताले काप्दै गरिन डरलाग्दो घोषणा,अब के हुन्छ ? ( पुरा भिडियो सहित ) – News452Online
एउटै नागको देखियो फरक-फरक रुप,माताले काप्दै गरिन डरलाग्दो घोषणा,अब के हुन्छ ? ( पुरा भिडियो सहित )
Posted byadmin	 February 4, 2021 Leaveacomment on एउटै नागको देखियो फरक-फरक रुप,माताले काप्दै गरिन डरलाग्दो घोषणा,अब के हुन्छ ? ( पुरा भिडियो सहित )
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ यो पनि पढ्नुहोला नेपाली चर्चित नायिका भुवन केसि हुन् । उनकाे उमेरले ६० वर्ष पुग्न लागिसकेका भुवन केसी अझै पनि उत्तिकै आकर्षक देखिन्छन् । कहिल्यै जिम र व्यायाम नगरेता पनि भुवन उत्तिकै ह्यान्डसम देखिन्छन् ।उनि नेपाली चलचित्रका सर्वाधिक सफल कलाकार समेत मानिन्छन्। उनले निर्माण र अभिनय गरेका अधिकांश चलचित्र सुपर हिट भएका छन्। फिल्ममा सफल हुदाँहुदै पनि यद्यपि भुवन पारिवारिक रूपमा भने असफल छन् ।
Posted byadmin February 4, 2021 Posted inrochak